Jan 05, 2020/0
Dec 31, 2019/0
Dec 29, 2019/0
Dec 24, 2019/0
၁၉၉၇ ခုနှစ်၊ အာရှနိုင်ငံများ၏ ငွေရေးကြေးရေး အကျပ်အတည်းဖြစ်စဉ်
(င)-စစ်ကိုင်းမြို့နယ်၊ အုတ်ဖိုကျေးရွာ အခြေခံပညာ မူလတန်းလွန်ကျောင်းအား သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနမှ ကျောင်းနေရာရွှေ့၍ ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
(စ)-ငပုတောမြို့နယ်တွင် အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်များ၊ ကျောင်းသားဦးရေနှင့် စာသင်ခန်းအချိုး မညီမျှသော အခြေခံပညာကျောင်းများကို ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘတ်ဂျက်တွင် ထည့်သွင်းတည်ဆောက် ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
(ဂ) အခြေခံပညာ ကျောင်းများ ဆောက်လုပ်ရာတွင် နိုင်ငံတော်မှ ချမှတ်ထားသော ပြတင်းပေါက်များ အစား PVC ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ခြင်းကို တရားဝင် ခွင့်ပြုခြင်း ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၄) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၆ ) ရက်မြောက်နေ့ (၁၆.၁၂.၂၀၁၉)
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၄) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၅) ရက်မြောက်နေ့ (၁၃.၁၂.၂၀၁၉)
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ၁၄ ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၃ရက်မြောက်နေ့ (၁၀. ၁၂. ၂၀၁၉)
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၄) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၂)ရက်မြောက်နေ့ (၆.၁၂.၂၀၁၉)
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၄) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၁)ရက်မြောက်နေ့ (၄.၁၂.၂၀၁၉)
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ၁၄ ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒသမနေ့ (၂. ၁၂. ၂၀၁၉)
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ၁၄ ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး နဝမနေ့ (၂၉.၁၁.၂၀၁၉)